Ma dhab baa in madaxweyne Donald Trump yahay ninka ugu khatarta badan caalamka? | Somaliska
Shaki kuma jiro in hab dhaqanka qalifsan ee mararka qaar uu ku kacdo madaxweynaha dhawaan la doortay ee Donald Trump yahay la iska weydiinayo in uu yahay ruux caafimaadkiisa taam yahay. Sifaadka cajiibka ah ee leeyahay ayaa ah mid aan lugu tilmaami karin hogaamiye.
Waxaa kale oo u dheer fudeeyd iyo ficil uu islamarkiiba la yimaado kolka fal dhaco ama xitaa isaga laf ahaantiisa wax laga sheego. Wuxuu sidoo kale caan ku yahay adeegsigga barta Twitter-ka uu ku ficiltimo. Wuxuu sidoo kale neceb yahay suxufiyiinta gaar ahaan kuwa ka howl gala telefeeyshinka CNN-ta.
Haddaba ninkani ma la oran karaa waa halis ama khatar caalamka soo wajahday?. Haddaba wargeeyska caanka ah The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa 25-kii bishoo agoosto ee sanadkan daabacay, buug lagagga hadlayo “Xaaladda Donald Trump ee khatarta ah”. Buugan ayaa waxaa tifaftiray caalimka xagga cilmi nafsiga ku taqasusay ee u dhashay dalkaasi Mareeykanka ee Dr Bandy Lee. Buuggan ayaa ah mid looga hadlayey xaaladda nafsiyadeed ee la sheegay in uu ku sugan yahay madaxweyne Trump-ka dalkaasi.
Dhaqaatiir tiro ahaan lugu sheegay 27 dhaqtar oo xagga maskaxda iyo cilmi nafsiga ah iyo khubaro dhanka luqada ah, falanqeeyayaal, macalimiin warbaahineed ay dhamaantood cutubyo kala duwan ku qoreen buuggaasi.
Dhinaca kale aqoonyahanno falanqeeyey buuggan ayaa waxeey sheegeen in hogaamiyenimadda Trump ay abuurtay raad aan horey loo arag oo caafimaadka nafta ah gaar ahaan gudaha dalka Mareykanka, waxayna sidoo kale sheegeen in ninka haatan AQALKA CAD ka arimya inuu yahay “ninka ugu khatarta badan dunida.”
Ugu dambeyntiina qorayaasha buuggan waxaa ay ku nuux kuuxsadeen in madaxweynaha Trump uu la daala dhacayo jirro maskaxeed oo aad u culus, taas ah mid dadyowga kale ee soo jiidata. Buugan ayaa bishan oktoobar horaanteedii waxaa uu noqday mid laga iibsan karo suuqa weyn ee Amazon kaas oo uu qiimihiisu yahay 16.79 doolarka Mareykanka ah.
Waxaa diyaariyey: Xafiiska Somaliska ee Göteborg
Dowladda oo soo rogtay nimdaam lugu ogaanayo da’da magangalyo doonka